सगरमाथा इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १९ फागुन २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी सगरमाथा इन्स्योरेन्स : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १९ फागुन २०७५)
सगरमाथा इन्स्योरेन्सले सेलिन्को इन्स्योरेन्स पीएलसी श्रीलंकाको संयुक्त लगानीमा २०५३ साउनदेखि कारोबार शुरू गरेको हो । हाल कम्पनीले केन्द्रीय र कर्पोरेट कार्यालयसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा ६५ शाखा कार्यालयबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बीमा समितिले रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउन दिएको निर्देशन कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को मुनाफाबाट एकमुष्ट बोनस शेयर जारी गरेर पूरा गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर हालसम्म पनि कम्पनीले उक्त बोनस प्रस्ताव गरेको छैन । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ५३ करोड ८२ लाख छ । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ८ करोड ४८ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २० प्रतिशत वृद्धि भएको हो । गत आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ७ करोड २ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको आम्दानीमा २२ प्रतिशत वृद्धि भएकाले नाफामा वृद्धि भएको हो ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७४/७५ बीच तुलना गर्दा :
पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीले कुल रू. १ अर्ब ८ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २५ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । रिजर्भ कोषमा रू. ६१ करोड २८ लाख छुट्याएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १ सय ११ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । बीमा कोषमा रू. ४८ करोड ८७ लाख जम्मा भएको छ ।
जारी बीमालेखको संंख्या ६५ हजार ४ सय २५ छ भने नवीकरण गरिएको बीमालेख संख्या २४ हजार ६ सय ३ रहेको छ । २ हजार ६ सय २१ जनालाई रू. १८ करोड ९२ लाख दाबी भुक्तानी गरेको छ भने २ हजार ५ सय ९४ जनालाई रू. ८१ करोड ७९ लाख दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
पुस मसान्त रू. १४ करोड ५३ लाख आम्दानी भएको छ भने रू. ६ करोड ४ लाख खर्च भएको छ । पुनर्बीमा कमिशनबाट रू. १५ करोड ७ लाख आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा सबै कार्य क्षेत्रमा अझ बढी सेवा विस्तार गर्दै जाने रणनीति लिएको छ ।
दोस्रो त्रैमासिक वित्तिय विवरण अनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३१ दशमलव ५४, मूल्य आम्दानी अनुपात रू. ४२ दशमलव ४८, प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ३ सय १९ दशमलव ६२, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. ७ सय १० दशमलव ७४ र तरलता अनुपात २ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । बुधवारको शेयरमूल्य रू. १ हजार २ सय ७९ कायम भएको छ ।
डिभिडेन्ड यिल्ड रेशियो : १.७२ प्रतिशत
अर्निङ पावर रेशियो : ०.०४९ गुणा
अर्निङ यिल्ड रेशियो : २.४६ प्रतिशत
कम्पनीको ६२ दिनको शेयर कारोबारलाई लिएर गरिएको मैनबत्ती विश्लेषणमा अन्तिम दिन ह्याम्मर आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य बुलिसमा रिभर्स हुने संकेत गर्दछ । विश्वसनीयता भने सामान्य रहेको छ । सोही अवधिको कारोबारमा आरएसआई न्यूट्रल जोन ४६ दशमलव ३३ स्केलमा छ । यसले शेयर खरीदविक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन ७ दशमलव ५४ विन्दुमा छ । यस अवधिमा उतारचढाव सामान्य रहेको छ । कम्पनीको मुभिङ एभरेजमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य यी दुवै रेखाको बिचमा छ । पछिल्लो शेयरमूल्य रू. १ हजार २ सय ७९ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई महँगिएमा रू. १ हजार २ सय ८९ मा प्रतिरोध पाउन सक्छ भने सस्तिएमा १ हजार २ सय ६७ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।
आइतवार सगरमाथा इन्स्योरेन्सको बुक क्लोज (साधारणसभा कहिले ?)
बोनस पारित गर्न सगरमाथा इन्स्योरेन्सको साधारण सभा (कति प्रतिशत)